30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican 2022
Dugsiyada injineernimada biomedical -ka ugu fiican ee Kanada, Texas, California, UK, iyo qaybaha kale ee adduunka ayaa la soo uruuriyay lagana dooday qoraalkan baloogga si loo fududeeyo gelitaankaaga.
Haddii aad rabto inaad barato injineernimada biomedical, iska qorida mid ka mid ah iskuulada ugu fiican adduunka waa meel fiican oo laga bilaabo. Sababtoo ah baahida weyn ee loo qabo shaqaalaha haysta shahaadada injineernimada biomedical, waxaad ku kalsoonaan kartaa in ficil ahaan hay'ad kasta oo aad tagto ay ku siin doonto soo -celin wanaagsan maalgashigaaga.
Waa maxay injineernimada Biomedical?
Halkee ka shaqayn karaa Injineerka Biyomediga?
Intee in le'eg ayuu heli karaa injineer bayoolaji ah?
Iskuulada Injineeriyada Biyomediga ee ugu Fiican
1. Jaamacadda Johns Hopkins
2. Machadka Farsamada ee Georgia
3. Machadka Teknolojiyadda Massachusetts (MIT)
4. Jaamacadda Toronto (U of T)
5. Jaamacadda Tokyo
6. Jaamacadda Purdue
7. Jaamacadda Duke
8. Jaamacadda California - Irvine (UCI)
9. Jaamacadda Shanghai Jia Tong
10. Jaamacadda Gobolka Pennsylvania
Iskuulada Injineeriyada Biyomediga ee ugu Fiican Kanada
1. Jaamacadda British Columbia (UBC)
2. Jaamacadda Alberta
3. Jaamacadda McGill
4. Jaamacadda Waterloo
5. Jaamacadda Galbeedka
Iskuulada Injineeriyada Biyomediga ee ugu Fiican Texas
1. Jaamacadda Bariiska
2. Jaamacadda Texas ee Austin
3. Jaamacadda Texas A&M
4. Jaamacadda Texas ee Dallas
5. Jaamacadda Houston
Jaamacadaha ugu sareeya injineernimada biomedical UK
1. Jaamacadda Strathclyde
2. Jaamacadda Glasgow
3. Jaamacadda Bradford
4. Kuliyadda Imperial ee London
Iskuulada Injineeriyada Biyomediga ee ugu Fiican California
1. Jaamacadda Stanford
2. Jaamacadda California, Berkeley
3. Jaamacadda California, San Diego
4. Jaamacadda California, Los Angeles (UCLA)
5. Machadka California ee Farsamada (Caltech)
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Injineeriyada Biyomediga ee ugu Fiican
Injineernimada biomedical waa adeegsiga mabaadi'da injineernimada iyo fikradaha naqshadeynta ee daawada iyo bayoolaji ujeedooyinka daryeelka caafimaadka. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Injineerinka Caafimaadka.
Si taas loo fududeeyo, injineernimada biomedical -ku waa qaybta injineernimada ee daawada, iyo bayoolaji inta badan waxaa loo adeegsadaa goobta daryeelka caafimaadka si kor loogu qaado caafimaadka. Qalabka caafimaadka sida hawo -mareenada, mashiinnada BP, iyo aaladaha kale ee caafimaadka waxaa naqshadeeyay injineerada noolaha si looga hortago jirrooyinka ama loo hagaajiyo caafimaadka dadka loona badbaadiyo nolosha.
Ka sokow naqshadaynta qalabka caafimaadka, injineeradaani waxay sidoo kale naqshadeeyaan qalab khaas ah sida beddelidda addimada iyo xubnaha macmalka ah, rakib oo siiya kaalmo farsamo qalabka tijaabinta isbitaalka, sidoo kale waxay la shaqeeyaan kooxaha wax -soo -saarka si loo hubiyo in badeecad kasta ay tahay mid waxtar leh oo ammaan ah.
Injineerada bayoolajiga ayaa baahi weyn u qaba, masiibada ugu dambaysayna waxay ka dhigtay inay xitaa noqdaan kuwo aad u sarreeya. Aadista iskuul suudh xoog leh ku leh injineernimada biomedical -ka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo maro helitaanka shahaadada iyo noqoshada injineer biomedical oo aqoon leh.
Ka hadlida shahaadooyinka, waxaad kasban kartaa bachelor, master, iyo xitaa dhakhtar ku jira injineernimada biomedical ilaa iyo intaad ka soo baxdo shuruudda ah in laguu oggolaado barnaamijka iyo sidoo kale haddii dugsiga aad doorato uu ku siiyo barnaamijka shahaadada aad rabto eryan.
Shahaado ku leh injineernimada biomedical, waxaad ka shaqayn kartaa xarumaha caafimaadka iyo machadyada, xarumaha cilmi baarista iyo wax soo saarka, wakaaladaha sharciyeynta dowladda, iyo jaamacadaha. Waxaad qaban kartaa jagooyin sida;
Cilmi -baare bioengineering
La -taliyaha injineernimada biomedical
Waxa ay injineerada biomedical -ku kasbadaan badiyaa waxay ku kala duwan yihiin waddanka, gobolka, iyo wixii la mid ah, laakiin injineerada bayoolajiga ee Mareykanka waxay kasbadaan $ 70,990 illaa $ 118,020 sanadkii. Waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu mushaharka badan xagga caafimaadka iyo injineernimada.
Si lagaaga caawiyo inaad doorato iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu fiican, waxaan diyaariyey liistada iskuuladan si ay kaaga caawiyaan xulashadaada.
10ka dugsi ee ugu wanaagsan injineernimada bayoolajiga waa:
Jaamacadda Toronto (U of T)
Jaamacadda California - Irvine (UCI)
Jaamacadda Shanghai Jia Tong
Jaamacadda Pennsylvania State University
Jaamacadda Johns Hopkins waxay caan ku tahay barnaamijyadeeda caafimaad, waa jaamacad heer caalami ah oo ku taal goobta daryeelka caafimaadka mana aha wax la yaab leh inay ka mid tahay iskuulada injineernimada biomediga ugu fiican. Dugsiga Whiting ee Injineerinka iyo Johns Hopkins School of Medicine labaduba waxay siiyaan waxbarasho degdeg ah ardayda waaxda injineernimada biomediga.
Barnaamijka injineernimada biomedical -ka ee Jaamacadda Johns Hopkins wuxuu u horseedaa bachelor, master, iyo Ph.D. waxaana laguu ogolaan karaa mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada ilaa hadda aad buuxisay shuruudaha. Qalinjabiyeyaasha Hopkins BME waxay sii wadaan inay noqdaan hogaamiyaasha warshadaha, daawada, iyo sayniska xallinta dhibaatooyinka adduunka.
Machadka Teknolojiyadda Georgia waa mid ka mid ah iskuulada injineeriyada ugu wanaagsan ee biomedical -ka ugu wanaagsan, waxay bixisaa barnaamijyada bachelor -ka, Master -ka, iyo doctoral -ka iyada oo loo marayo Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering. Ardaydu waxay ku qalabaysan yihiin xirfado iyo aqoon degdeg ah si ay u hagaajiyaan caafimaadka iyo fayoobaanta oo ay u noqdaan hoggaamiyeyaal caalami ah xagga injineernimada biomedical-ka.
Manhajka cusub ee dugsigu wuxuu u oggolaanayaa ardayda inay si dhow ula falgalaan aqoonyahannada iyo saynisyahannada si ay u xalliyaan dhibaatooyinka adag, dhabta ah ee dunida iyo waliba inay noqdaan kuwo hal-abuur leh. Dugsigu wuxuu leeyahay 10 xarumood oo udub dhexaad u ah oo leh qalab iyo qalab casri ah si loogu baro ardayda leh barashada khibrad gacmeed.
MIT waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya adduunka gaar ahaan dhinacyada daawada, injineernimada, iyo ganacsiga. Machadka waxbarashada sare ee gaarka loo leeyahay waxaa la aasaasay 1861 weligiisna wuxuu hormuud u ahaa bixinta waxbarasho tayo leh oo kala duwan oo duurka iyo heerarka waxbarasho ah.
MIT waxay bixisaa barnaamijka injineernimada biomediga ee shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada qalin -jabinta iyada oo loo marayo Waaxda Injineerinka Bayoolajiga. Injineernimada biomedical-ka waxaa loogu yeeraa injineernimada bayoolojiga halkan MIT waxayna baraa oo qalabeysaa hoggaamiyeyaasha jiilka xiga si loo hagaajiyo bioscience iyo biotechnology iyadoo la falanqeynayo oo la isku darayo hababka noolaha molecular iyo cellular ee tiro ahaan, isdhexgalka, iyo qaab-u-jiheynta.
Jaamacadda Toronto waxay ka mid tahay iskuulada ugu fiican Kanada iyo adduunka, waxay bixisaa barnaamijyo tacliimeed oo aad u ballaaran oo ah heerka koowaad ee jaamacadda iyo heerka qalin -jabinta. Barnaamijyada la bixiyay waxay ku faafeen dhinacyo badan, oo isugu jira daawo iyo injineernimo ilaa ganacsi iyo dadnimo.
U of T wuxuu leeyahay kuliyad injineernimo oo hoy u ah Machadka Injineerinka Biyomediga oo ah cilmi baaris kala duwan oo injineernimada, daawada, iyo ilkaha ay ku kulmaan si loo horumariyo xalal cusub oo wax looga qabto arrimaha caafimaadka adduunka. Waaxdu waxay bixisaa injineernimada biomedical yar iyo cilmi -baaris kale iyo shahaadooyin xirfadeed oo u horseeda Ph.D., MA, iyo MEng.
Daadadka cilmi -baarista waxay diiradda saaraan injineernimada kiliinikada, teknolojiyadda unugyada iyo unugyada, iyo injineernimada moodeelka. Haddii aad raadineyso inaad iska qorto mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomediga ugu fiican, waa inaad tixgelisaa U of T Institute of Biomedical Engineering.
Jaamacadda Tokyo waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu wanaagsan oo bixiya shahaadada koowaad iyo tan qalinjabin oo ay weheliyaan xirfado kaa caawin doona inaad xirfad ka dhigato warshadaha injineernimada caafimaadka. Iskuulka Injineeriyada waxaa ku yaal Waaxda Biyo -injineerinka oo bixisa barista injineernimada biomedical.
Waaxdu waxay u saamaxaysaa ardayda inay wax bartaan isla mar ahaantaana helaan aqoonta dhammaan dhinacyada tiknoolajiyadda kala duwan iyo injineernimada. Ardaydu waxay u sii fidsan yihiin fursado cilmi-baaris oo kala duwan oo ay ku jiraan beeraha aaladda bio-electronics, bio-electronics, iyo biomaterials.
Jaamacadda Purdue waa mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomedical-ka ugu wanaagsan, oo caan ku ah awoodda injineernimada, waxayna leedahay dhaqan dheer oo ah soo saarista qalin-jabiyayaal diyaar u ah aqoon sare leh. Machadku wuxuu leeyahay Kulliyad Injineerro ah oo tartamaysa, sidoo kale waa meesha kasta oo shahaadada koowaad ee injineernimada biomedical ay marka hore ka qeybgeli doonto fasallada muddo hal sano ah.
Ardaydu waxay halkan ku dhammaystiri doonaan barnaamijyada injineernimada kahor intaanay aadin Weldon School of Biomedical Engineering si ay ugu qalabeeyaan xirfadaha iyo aqoonta iyaga ka dhex mari doona warshadaha. Waaxdu waxay bixisaa shahaadooyin tacliimeed oo u horseeda bachelor, master, iyo shahaadooyin dhakhtar.
Waxay sidoo kale bixiyaan barnaamijyo edbin iskugu jira heerka qalin-jabinta si kor loogu sii qaado aqoontaada iyo xirfaddaada u-adeegsiga sayniska injineernimada biomedical-ka meelaha kale ee caafimaadka. Iyada oo hindisahaas baaxadda leh ay ka soo baxayaan kheyraad fara badan, isku xirnaan, iyo xiriiro warshadeed. Xaqiiqdii, ugu yaraan hal iskaashi, shaqo barasho, waxbarasho dibadeed waxaa dhammaystiray 92 boqolkiiba ardayda barnaamijka injineernimada biomedical ee Jaamacadda Purdue.
Waaxda Injineerada Biyomediga ee Jaamacadda Duke waxay ka mid ahayd tii ugu horreysay adduunka, waxaa la aasaasay 1967 waxaana loo aqoonsaday inuu yahay hormuudka berrinka sidoo kale wuxuu caan ku yahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu wanaagsan. Barnaamijka tacliinta sare ee BME ee Duke wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee la aqoonsan yahay ee BME ee Mareykanka sanadkii1972.
Qeybta Injineeriyada Biyomediga waxay hoos tagtaa Dugsiga Pratt ee Injineerinka, waxaana loo aas -aasay inay dadka u tababarto xirfad cusub oo u baahan aqoon ku saabsan dawada oo ka badan tan uu haysto injineerka celceliska ah iyo aqoonta injineer ka badan ta uu haysto dhakhtarka caadiga ah.
Barnaamijka tacliinta sare ee BME ee Duke waxaa loogu talagalay inuu kugu qalabeeyo khibrad waxbarasho oo saxeexan, oo kugu dhex gelinaysa naqshad gacmeed, sayniska xogta, xisaabinta, cilmi-baarista, iyo hal-abuurka si ay kugu dhiirrigeliso inaad noqoto injineero hal-abuur leh oo si fiican u qalabaysan si ay u xalliyaan dhibaatooyinka dhabta ah ee dhabta ah. Waxaad dooran kartaa ikhtiyaar laba jibbaar ah oo leh BME-ga shahaadada koowaad iyo injineernimada madaniga & deegaanka, sayniska kombiyuutarka, injineernimada korontada & kombiyuutarka, iyo injineernimada farsamada.
Si aad u sii dhisto khibraddaada berrinka waxaad ku sii wadan kartaa barnaamijyada Master -ka iyo doctoral -ka ee BME ee Jaamacadda Duke.
Iskuulka Samueli ee Injineerinka ee UCI wuxuu leeyahay lix waaxood oo waxbarasho oo ay ku jiraan Injineeriyada Biomedical. Waaxdu waxay ka mid tahay mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomedical -ka ugu fiican adduunka waxayna bixisaa shahaadada koowaad, MS, Ph.D., iyo isku darka MD/Ph.D. shahaadooyinka injineernimada biomedical oo ay weheliso Kuliyadda Caafimaadka ee UCI.
Waaxda waxaa loogu talagalay inay wax ka qabato arrimaha isgoyska injineernimada, bayoolajiga, iyo daawada, si loo wanaajiyo caafimaadka adduunka iyadoo la wado kobaca dhaqaalaha ee gobolka, gobolka, iyo qaranka. Gudaha, iyo sidoo kale ardayda caalamiga ah, ee buuxiya shuruudaha gelitaanka heer kasta oo waxbarasho ah, waa la aqbali doonaa iyada oo aan dib loo dhigin.
Jaamacadda Shanghai Jia Tong ee Shiinaha ayaa ka mid ah dugsiyada injineernimada biomedical-ka ugu sarreeya oo bixiya aqoon aasaasi ah oo aasaasi u ah injineernimada biomedical-ka ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda oo siisa qoto-dheer, baris balaaran oo loogu talagalay ardayda ku jirta sayidyada iyo heerarka daraasadda. Ardayda heer kasta oo waxbarasho ah ayaa sidoo kale u furan inay raacaan fursadaha cilmi -baarista.
Fursadaha cilmi-baaristu waxay ardayda u furaan barashada waayo-aragnimada gacanta oo laga fuliyo goobaha ugu sarreeya ee dugsiga. Waxay sidoo kale la shaqeeyaan saynisyahannada iyo aqoonyahannada sare si ay u xalliyaan dhibaatooyinka nolosha dhabta ah ee adag oo ay kor ugu qaadaan caafimaadka gudaha iyo dibaddaba.
Liiskayagii ugu dambeeyay ee iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu wanaagsan ee Waaxda injineernimada biomedical ee Jaamacadda Gobolka Pennsylvania. Waaxdu waxay siisaa waddo khaas ah ardayda cilmiga leh ee raba inay kor u qaadaan caafimaadka iyagoo isku daraya daawada injineernimada iyo horumarinta aalado u gaar ah si ay u arkaan in shaqsiyaadka qaarkood helaan daryeel caafimaad oo heer sare ah.
Adigoo ku biiraya laba edbin oo adag hal barnaamij tacliimeed oo dhib badan isla markaana ku siinaya iyada oo loo marayo afar uruurinta biochemistry, biomechanics, biomaterials, iyo sawirka caafimaadka iyo aaladaha, ardayda waxaa loo tababaray inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan berrinka. Waxay sidoo kale ka faa'iideystaan ​​fursado kala duwan oo caalami ah oo u oggolaanaya inay ku lug yeeshaan howlaha cilmi -baarista qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka.
Kuwani waa 10ka dugsi ee ugu wanaagsan injineernimada biomedical laakiin tani maahan dhammaadka maqaalkan. Hoosta, waxaan ka wada hadlay in ka badan iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu wanaagsan marka loo eego goobta si loo caawiyo ardayda hiigsanaysa meelahaas, iyo sidoo kale ardayda ka socota waddamada kale ama gobollada, fududeynta gelitaankooda.
Ma aha war hadda ah in Kanada ay ka mid tahay 5 xarumood ee waxbarasho ee ugu sarreeya adduunka, hay'adaha halkan waxay bixiyaan barnaamijyo kala duwan oo kala duwan oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka, sidaa darteed, ardayda ka socota waddan kasta waxay halkan u joogaan inay sii wataan shahaadadooda doorashada.
Hay'aduhu waxay bixiyaan waxbarasho tayo leh iyo shahaadooyin heer sare ah oo ay aqoonsadaan oo aqbalaan HR-yada urur kasta, shirkad, ama shirkad meel kasta oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, hoos udhaca inaad wax ku barato Kanada waa qiimaha sare ee waxbarashada ardayda caalamiga ah laakiin waxaad fursad u heli kartaa inaad ku guuleysato deeq waxbarasho si aad uga gudubto waxbarashadaada. The “Talooyin” dhamaadka maqaalkan ayaa kaa caawin doona inaad sii waddo raadinta deeqaha waxbarasho sida arday caalami ah Kanada.
Iskuulada injineeriyada biomediga ugu fiican ee Kanada waa:
Jaamacadda British Columbia (UBC)
Ka sokow lahaanshaha waax ka mid ah iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu fiican Kanada, UBC waxay caan ku tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya Kanada iyo adduunka oo dhan, oo bixisa waxbarasho tayo leh barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan oo kala duwan laga bilaabo ganacsiga iyo injineernimada ilaa daawada iyo sharciga.
Kulliyadda UBC ee Sayniska La -dabaqay iyo Kulliyadda Daawada ayaa iska kaashanaya sidii loo abuuri lahaa Dugsiga Injineeriyada Biyomediga oo bixiya barnaamijyo waxbarasho oo u horseeda BSc, MEng, MASc, iyo Ph.D. shahaadooyinka. Barnaamijka tacliinta sare ee BME wuxuu ku qulqulaa guud ahaan Bioengineering -ka Gacanta, Nidaamyada Biomedical & Calaamadaha, Biomechanics & Biomaterials, iyo Informatics Biomedical.
Jaamacadda Alberta sidoo kale waa hay'ad kale oo heer sare ka ah waxbarashada sare ee Kanada, waxay sidoo kale ka mid tahay dugsiyada ugu wanaagsan injineernimada biomedical-ka Kanada. Kulliyadda Injineerinka iyo Kuliyadda Caafimaadka & Ilkaha ee Alberta waxay iska kaashanayaan inay siiyaan waxbarashada injineernimada Biomedical ardayda hiigsanaysa gudaha iyo dibaddaba.
Waaxdu waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad iyo jaamacadeed oo leh fursado cilmi-baaris si ay u siiso ardayda xirfadaha dhabta ah ee dunida ee khuseeya arrimaha la midka ah.
Kulliyadda Caafimaadka iyo Sayniska Caafimaadka waxay bixisaa barnaamij injineernimo bayoolaji ah oo u horseedaya arday dhigta shahaadada koowaad, shahaadada injineernimada biomedical ee tarjumaadda, MEng ama Ph.D., Postdoc, iyo fursado kale oo cilmi baaris. Barnaamijku waa barxad ballaadhan oo isku dhafan oo isku daraysa adeegsiga injineernimada, sayniska jirka, iyo sayniska kombiyuutarka daawada iyo cilmiga nolosha.
Miyaad raadineysaa inaad iska qorto mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomediga ugu fiican Kanada? Ha eegin wax dheeraad ah maadaama Jaamacadda Waterloo ay bixiso waxbarashada injineernimada biomedical-ka ee heerka koowaad iyo heerka qalin-jabinta ee waxbarashada. Ardayda waxaa loo tababaray inay helaan xirfado dhab ah oo ay codsan karaan si ay u xalliyaan dhibaatooyinka nolosha dhabta ah kuna guulaystaan ​​warshadaha.
Jaamacadda Galbeedka waxay leedahay Iskuul injineernimada biomedical oo ka mid ah iskuulada injineeriyada biomedical -ka ugu fiican Kanada sidoo kale caan ka ah adduunka. Dugsigu waa iskaashiga kulliyadaha Cilmiga Caafimaadka, Sayniska, iyo Injineernimada; iyo Schulich School of Medicine & Dentistry.
Dugsigu wuxuu kaloo kor u qaadaa ka -qaybgalka iskaashatada ee cilmi -baarayaasha caafimaadka iyo aasaasiga ah ee maaddooyinka oo ay ku jiraan biomaterials, biomechanics, mechatronics, iyo dhiirri -gelinta xiriiryo kala duwan oo u dhexeeya kulliyadaha kale.
Kuwani waa iskuulada injineeriyada biomedical -ka ugu fiican Kanada, dhammaantood waxay aqbalaan ardayda caalamiga ah injineernimada biomedical laakiin waa qaali ardaydaas.
Texas waa gobol ku yaal Mareykanka waxayna leedahay qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Mareykanka iyo adduunka. Halkan, waxaan ku sharraxay oo aan ka wada hadlay iskuulada injineernimada biomedical ee ugu wanaagsan Texas si loo fududeeyo gelitaanka kuwa jooga Texas ama doonaya inay halkaas wax ka bartaan dalalkooda.
Jaamacadda Rice waa machad sare oo ku yaal gobolka Texas waxayna ku taal Waaxda Bioengineering taasoo horseed u ah shahaadada koowaad, Master -ka, iyo Ph.D. barnaamijyada iyo xulashooyinka kale ee cilmi baarista. Cilmi-baaristu waxay sahaminaysaa biomaterials-ka, soo-saarista noolaha iyo farsamo-yaqaanka, sawir-qaadista biomedical-ka iyo qalabaynta, gacanta, moodeelka, iyo injineernimada hidde-wadaha iyo bayoolajiga isku-darka, iyo xisaabinta iyo teoretical bioengineering iyo biofysics.
Dugsiga Cockrell ee Injineerinka ee Jaamacadda Texas ee Austin wuxuu siiyaa Injineeriyada Biomedical barnaamijyada shahaadada koowaad iyo sare ee ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Barnaamijku wuxuu u diyaariyaa ardayda inay helaan xirfado injineernimo wax ku ool ah safarradooda si loo hormariyo daryeelka caafimaadka.
Jaamacadda Texas A&M waa mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomedical -ka ugu fiican Texas, Waaxda Injineeriyada Biyomediga waxay u heellan tahay xallinta arrimaha caafimaadka adduunka iyada oo loo marayo sahaminta fikradaha cusub, cilmi baaris isku dhafan, iyo hal -abuurnimo. Waaxdu waxay bixisaa barnaamijyo BME oo horseed u ah Bachelor of Science, Minor Underor, Master of Science, Master of Engineering, Degree Degree (MEng/MBA), iyo Doctor of Philosophy.
Sida caadiyan loo tixraaco, UT Dallas wuxuu bixiyaa mid ka mid ah waxbarashada injineernimada biomediga ugu fiican Texas. Koorsada waxaa lagu bixiyaa Waaxda Bioengineering ee hoos timaada Erik Jonsson School of Engineering iyo Computer Science. Waaxdu waxay bixisaa barnaamij jaamacadeed oo u horseeda Bachelor of Science. Waxaad kaloo aadi kartaa barnaamijyada degdegga ah iyo barnaamijyada caafimaadka kahor.
Waxay sidoo kale bixiyaan barnaamijyo shahaadooyin qalin -jabis ah oo leh cilmi -baaris xoog -saar ah oo ku saabsan injineernimada neural, biosensors iyo bioelectronics, biomaterials, biomechanics, bioimaging, iyo biology system.
Jaamacadda Houston waa jaamacad kale oo sare oo ku taal Texas iyo Kullenkeeda Injineerinka Cullen - oo bixisa injineernimada biomedical - waa mid ka mid ah dugsiyada injineernimada ugu sarreeya ee Texas. Manhajka barnaamijku waa mid hal-abuurnimo leh, hal-abuurnimo leh, iyo daryeel caafimaad oo diiradda saaraya sidii ardayda loo siin lahaa aqoon durugsan oo duurka ah loona dejiyo waddo xirfadeed oo guul leh.
Barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo qalinjabinta ee BME ayaa halkan lagu bixiyaa ardayduna waxay codsan karaan barnaamijka ay doorteen haddii ay buuxiyaan shuruudaha.
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya 5 jaamacadaha injineernimada biomedical -ka ee Texas, USA, wax badan ka baro shuruudaha barnaamijkooda oo bilaw codsashada.
Ka hadlida xarumaha ugu sarreeya ee adduunka, Boqortooyada Midowday waxay ku jirtaa liiska 5 -ta ugu sarreysa, markaa u -aadidda halkan si aad wax uga barato shahaadada injineernimada biomedical -ka ayaa kugu kasban doonta shahaado caan ah iyo fursado aad ku fiicnaato berrinka.
College Imperial London
Jaamacadda Strathclyde waa machad sare oo dadweyne oo ku yaal Glasgow, Scotland, UK, waxayna bixisaa barnaamij injineernimo biomedical heer sare ah oo u horseeda BEng, MSc, MEng, iyo fursado kale oo cilmi baaris. Waaxda BME waxay leedahay tas-hiilaad casri ah oo loogu talagalay in kor loogu qaado waayo-aragnimada ardayda iyo cilmi-baarista.
Dugsiga Injineerinka James Watt ee Jaamacadda Glasgow wuxuu ka mid yahay iskuulada injineeriyada biomediga ugu fiican UK. Dugsigani wuxuu bixiyaa barnaamijyo tacliimeed oo aad u ballaaran oo duurka injineernimada ah oo ay ku jiraan injineernimada biomedical. Barnaamijka BME halkan wuxuu u horseedaa BEng iyo MEng ama MSc oo qaadata 4 iyo 5 sano siday u kala horreeyaan.
Codsadayaasha UK iyo kuwa caalamiga ahba waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan bachelor ama sayidyada injineernimada biomedical ee Jaamacadda Bradford. Barnaamijka bachelor -ka wuxuu u horseedaa BEng (Hons) halka barnaamijka sayidku u horseedo MSc. Waxa kale oo jira BME isku jira oo ah barnaamijka BEng/MEng oo aad sidoo kale aadi karto. Ardaydu waxay sidoo kale la kulmaan waxbarashada cilmi -baarista iyo sannadka meelaynta sandwich ee warshadaha.
Kulliyadda Imperial College London waa hay'ad ugu sarreysa Boqortooyada Midowday waxayna leedahay Waaxda Bioengineering oo caan ku ah waxbarashadeeda heerka-caalami ah waxayna si joogto ah ula jirtaa iskuulada injineernimada biomedical-ka ugu fiican UK. Waaxdu waxay bixisaa shahaadada koowaad iyo tan qalinjebinta ee BME oo u horseedda MEng, MSc, MRes, iyo Ph.D., iyo sidoo kale fursado kale oo cilmi baaris.
Waaxda UCL ee Fiisikiska Caafimaadka iyo Injineeriyada Biomedical waxay bixisaa cilmi-baaris hormuudnimo caan ah iyo isku-dhafnaan waxbarasho isku-dhafan oo xiriir la leh isbitaallo badan oo wax lagu baro. Waaxdu waxay bixisaa shahaadooyin la aqoonsan yahay iyo barnaamijyo dib -u -dhigasho ah, shahaadooyin cilmi -baaris, iyo tababar dhakhtar.
Kuwani waa 5 dugsi sare ee injineernimada biomedical-ka ee Boqortooyada Midowday oo caan ku ah waxbarashadooda heerka-adduunka iyo barnaamijyada injineernimada biomedical-ka.
Kaliforniya waa gobol firfircoon oo ku yaal Mareykanka oo ay ku nool yihiin dad kala duwan oo ka soo kala jeeda dhaqamo kala duwan waxaana loo arkaa meel aad u fiican oo wax lagu barto. Qaar ka mid ah kulliyadaha ugu sarreeya adduunka iyo Mareykanka ayaa ku jira gobolkan. Kuleejyadani waxay ku leeyihiin sumcad caalami ah barnaamijyada tacliimeed iyo shahaadooyinka ay bixiyaan.
Halkan, waxaan ku qeexay oo aan kala hadlay iskuulada injineernimada biomedical-ka ugu fiican ee Kaalifoorniya si loo fududeeyo gelitaanka ardayda ha ahaato gobolka ama ka-baxsan.
Jaamacadda California, Berkeley
Jaamacadda California, San Diego
Jaamacadda California, Los Angeles (UCLA)
Haa! Jaamacadda Stanford waxay ku taal Kaliforniya oo waxaad horey u ogtahay sida ay u weyn tahay jaamacadani, waa jaamacadda ugu fiican adduunka, xitaa barnaamijyadeeda waxbarasho ayaa ah kuwa ugu sarreeya. Stanford waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada biomediga ugu fiican California, oo bixisa bioengineering iyada oo loo marayo Iskuulada Daawada Injineerinka.
Kulliyaddu waxay bixisaa shahaadooyin jaamacadeed oo u horseeda BS Bioengineering iyo BS in Computation Biomedical. Shahaadooyinka qalin -jabinta ayaa sidoo kale la bixiyaa oo u horseeda Ph.D., Barnaamijyada Master -ka, Labada iyo Wadajirka, iyo Isku -duwaha Aqoonyahanka MD. U -tartamayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ayaa halkan ka codsan kara laakiin waa inaad ogaataa gelitaanka Stanford inuu yahay mid aad u tartamaya.
Sida caadiyan loo tixraaco, UC Berkeley waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya Mareykanka iyo adduunka. UC Berkeley waxaa ku yaal Waaxda Bioengineering, oo caan ku ah mid ka mid ah iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu fiican ee California, oo bixisa barnaamijyo cilmi baaris iyo waxbarasho oo horseed u ah teknoolojiyadda isbeddelka, iyo kobcinta bulsho tababbareysa oo dhiirrigelisa jiilka xiga ee bioengineers.
Barnaamijka BME ee UC Berkeley wuxuu siiyaa BSc, MEng, Ph.D. ee cilmiga bioengineering, iyo Master of Translational Medicine degrees. ardayda ka socota dhammaan qaybaha nolosha ayaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan barnaamij kasta oo shahaadooyin bioengineering ah oo ay doortaan illaa iyo inta ay ka soo baxayaan u -qalmitaanka iyo shuruudaha kale ee inta badan sarreeya si loo buuxiyo. Gelitaanka halkan sidoo kale waa mid aad u tartan badan.
Dugsiga Injineerinka ee UC San Diego Jacobs wuxuu bixiyaa bioengineering heer jaamacadeed iyo heerka qalin -jabinta ee waxbarashada. Barnaamijka qalin -jabinta wuxuu u horseedaa M.Eng., MS, iyo Ph.D. halka shahaadada hoose ay u horseedayso BS.
Samueli Bioengineering waa waaxda bixisa injineernimada biomedical -ka UCLA waxaana loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah iskuulada injineeriyada biomedical -ka ugu fiican California. Barnaamijku wuxuu u horseedaa qalin -jabinta iyo shahaadooyinka shahaadada koowaad iyo sidoo kale xulashooyinka cilmi -baarista ee diiradda saaraya shan aag oo muhiim ah: moodeelka moodeelka, gacanta, iyo unugyada, aaladaha biomedical iyo bioinstrumentation, sawirka biomedical, iyo cilmiga xogta biomedical iyo injineernimada neerfaha.
Waaxda Biotechnering ee Caltech ayaa ugu saraysa barnaamijyada biomedical-ka iyo bioengineering-ka. Barnaamijka qalin -jabinta ee BE wuxuu u horseedaa Master iyo Ph.D. shahaadada halka barnaamijka shahaadada koowaad uu u horseedo BSc. Ardayda ayaa sidoo kale loo oggol yahay inay ku quustaan ​​barnaamijyada cilmi baarista oo ay helaan xirfadaha dhabta ah ee lagu dabaqi karo.
Kuwani waa 5 dugsi sare ee injineernimada biomedical ee California iyo Mareykanka, raac xiriirrada la bixiyay si aad wax uga barato shuruudaha barnaamijka iyo shuruudaha u -qalmitaanka.
Injineeriyada biomedical miyuu yahay xirfad wanaagsan?
Xirfadda injineernimada biomedical -ka ayaa ah mid abaalmarin badan leh oo qalin -jabiyayaashu si joogto ah ugu baahan yihiin maaddaama ay weli tahay goob soo koreysa.
Ma jiraa baahi weyn oo loo qabo injineerada bayoolajiga?
Haa, injineerada bayoolajiga ayaa baahi weyn u qaba, shaqaalaynta berrinkana waxaa la saadaalinayaa inay koraan 5% laga bilaabo 2019 illaa 2029.
Waa kuwee jaamacadda ugu fiican sayniska bayoolajiga?
Jaamacadda Harvard waxay ugu fiican tahay sayniska biomedical
Johns Hopkins miyuu leeyahay injineernimada biomedical?
Haa, Jaamacadda Johns Hopkins waxay bixisaa injineernimada biomedical taasoo u horseedda qalin jabinta iyo shahaadada koowaad.
Halkee bay injineerada bayoolajiga ka helaan lacagta ugu badan?
Gobollada ay injineerada bayoolajiga ka helaan lacagta ugu badan waa Minnesota, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, iyo California.
Tani waxay soo afjari doontaa iskuulada injineernimada biomedical -ka ugu wanaagsan waxaanan rajaynayaa inay wax -tarmeen.
10 Jaamacadaha Sare ee Cuba ee Ardayda Caalamiga ah
Iskuulada Caafimaadka ee Maryland
injineerka biomedical -ka ugu fiican ee dugsiyada canada giskuulada injineeriyada ugu fiicaniskuulada injineernimada biomedical -ka ugu fiican ee californiaiskuulada injineernimada biomediga ugu fiican ee Texasiskuulada injineernimada biomediga ugu fiican adduunkaiskuulada injineeriyada biomediga ugu fiican UK
Previous Post:13ka Dugsi Caafimaad Ee Ugu Sarreeya Oo Lacag La'aan Ah
Post Next:9 -ka Dugsi ee ugu Wanaagsan Eeyaha Ey ee Florida